Ny maha-olom-baovao antsika ao amin'i Kristy - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Journal succession > 2016-03 mpandimby ny Magazine > Ny maha-izy antsika vaovao ao amin'i Kristy
Nantsoin’i Martin Luther hoe “mpanota sy olo-masina miaraka” ny Kristianina. Tamin'ny teny latinina simul iustus et peccator no nosoratany tany am-boalohany. Simul dia midika hoe "miaraka" amin'ny teny alemana, iustus dia midika hoe "marina", et midika hoe "ary" ary ny peccator dia midika hoe "mpanota". Raha raisina ara-bakiteny dia midika izany fa sady miaina ao anatin’ny fahotana sy ny tsy ota no miaraka. Ny teny filamatr'i Lotera dia ho fifanoherana amin'ny teny. Saingy niteny an'ohatra izy ary naniry ny hiresaka momba ny mifanohitra amin'izany hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany dia tsy afaka tanteraka amin'ny fitaoman-dratsy isika. Na dia mihavana amin’Andriamanitra aza isika (olo-masina), dia tsy manana fiainana lavorary tahaka an’i Kristy (mpanota). Rehefa nandrafitra io teny io i Lotera, dia nampiasa ny fitenin’ny apostoly Paoly indraindray izy mba hanazavana fa ny fototry ny filazantsara dia fanisana roa. Amin'ny lafiny iray, ny fahotantsika dia isaina amin'i Jesosy sy antsika ho fahamarinany. Io fiteny ara-teknika ara-teknika amin'ny fampindram-bola io dia ahafahana manambara izay ara-dalàna ary noho izany dia tena marina, na dia tsy hita eo amin'ny fiainan'ny olona ampiharana azy aza izany. Nilaza koa i Lotera fa raha tsy amin’i Kristy mihitsy, dia tsy ho lasa fananantsika mihitsy ny fahamarinany (eo ambany fifehezantsika). Fanomezam-pahasoavana ho antsika ihany izany raha ekentsika avy amin’izany. Mandray izany fanomezam-pahasoavana izany isika amin’ny firaisan-kina amin’ilay mpanome ny fanomezana, satria amin’ny farany dia ilay mpanome ihany no fanomezana. Jesosy no fahamarinantsika!Mazava ho azy fa be dia be ny zavatra tian’i Lotera holazaina momba ny fiainana kristiana noho io fehezanteny tokana io. Na dia miombon-kevitra amin'ny ankamaroan'ny fehezanteny aza isika, dia misy lafin-javatra tsy ahafahantsika manaiky izany. Ny fanakianan'i J. de Waal Dryden tao amin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny The Journal of the Study of Paul and His Letters dia milaza toy izao manaraka izao (Misaotra an'i John Kossey namako akaiky aho tamin'ny fandefasana ireto andalana ireto.):
Ny tenin’i [Lotera] dia manampy amin’ny famintinana ny fotopoto-pitsipika hoe ny mpanota nohamarinina dia ambara ho marina amin’ny alalan’ny fahamarinan’i Kristy “hafa firenena” fa tsy araka ny fahamarinan’ny tsirairay, ny tenany, izay mitoetra ao anatiny. Ny tsy maha-zava-dehibe an'io teny io dia rehefa hita - na amin'ny saina na amin'ny tsy fahatsiarovan-tena - ho fototry ny fanamasinana (ny fiainana kristianina). Ny olana eto dia ny fanohizana ny fanondroana ny kristiana ho “mpanota”. Ny teny hoe peccator dia manondro mihoatra noho ny sitrapo ara-moraly na ny fironana hanao zavatra voarara, fa mamaritra ny fotopampianaran'ny Kristiana momba ny maha-izy azy. Ny kristiana dia manota tsy amin’ny asany ihany, fa amin’ny maha-izy azy koa.Raha ara-tsaina, ny tenin’i Lotera dia mampitony ny fahamelohana ara-môraly, fa mitazona ny henatra. Ny endrik’ilay mpanota nohamarinina mazava tsara, izay manambara ampahibemaso koa ny famelan-keloka, dia manimba tanteraka io famelan-keloka io raha maneho ny fahatakarana ny tena ho mpanota hatrany amin’ny fotony, satria manilika tanteraka ny singa miova ao amin’i Kristy. Ny Kristiana amin'izay dia hanana endrika ara-pananahana izay hamafisin'ny fanao mahazatra ary amin'izany dia maneho izany fahatakarana izany ho hatsaran-toetra Kristiana. Amin'izany fomba izany, ny henatra sy ny fanamavoana ny tena. ("Famerenana ny Romana 7: Lalàna, Tena, Fanahy," JSPL (2015), 148-149)
Raiso ny maha-izy antsika vaovao an'i Kristy
Araka ny voalazan’i Dryden, Andriamanitra dia “manandratra ny mpanota ho amin’ny toerana ambony kokoa”. Ao amin’ny firaisana sy fiombonana amin’Andriamanitra, ao amin’i Kristy sy amin’ny alalan’ny Fanahy, dia “ olom-baovao” isika (2. Korintiana 5,17) ary niova mba hahafahantsika “miombona” amin’ny “toetran’Andriamanitra” (2. Petrus 1,4). Tsy olona mpanota intsony isika izay maniry mafy ny ho afaka amin’ny toetrany mpanota. Mifanohitra amin’izany, fa zanaka natsangan’Andriamanitra, malala, nampihavanina, natao tahaka ny endrik’i Kristy isika. Miova tanteraka ny eritreritsika momba an'i Jesosy sy ny tenantsika rehefa manaiky ny maha-izy antsika vaovao ao amin'i Kristy isika. Takatsika fa tsy antsika izany noho ny maha-izy antsika, fa noho i Kristy. Tsy antsika izany noho ny finoantsika (izay tsy feno foana), fa noho ny finoana an’i Jesosy. Mariho ny famintinan’i Paoly izany tao amin’ny taratasiny ho an’ny fiangonana tany Galatia:
Izaho velona, ​​nefa tsy izaho ankehitriny, fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ny nofo dia ivelomako amin’ny finoana ny Zanak’Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy (Galatianina). 2,20).
I Paoly dia nahatakatra an’i Jesosy ho foto-kevitra sy tanjon’ny finoana mahavonjy. Amin'ny maha lohahevitra azy dia izy no mpanelanelana mavitrika, mpamorona ny fahasoavana. Amin’ny maha-zava-dehibe azy, dia mamaly toy ny iray amintsika amin’ny finoana lavorary izy, ka manao izany eo amin’ny toerany sy ho antsika. Ny finoany sy ny tsy fivadihany, fa tsy ny antsika, no manome antsika ny maha-izy antsika vaovao sy mahatonga antsika ho ao aminy. Araka ny nomarihiko tao amin’ny tatitra nataoko isan-kerinandro herinandro vitsivitsy lasa izay, dia tsy manadio ny akanjontsika Andriamanitra ary avy eo mamela antsika ho amin’ny ezaka ataontsika manokana hanaraka an’i Kristy. Mifanohitra amin’izany kosa, noho ny fahasoavany no ahafahany mandray anjara amim-pifaliana amin’izay nataony tao anatintsika sy tamin’ny alalantsika. Hitanareo fa ny fahasoavana dia mihoatra noho ny tselatra eo imason’ny Raintsika any An-danitra. Avy amin’ny Raintsika izay nifidy antsika izany, izay manome antsika fanomezana sy fampanantenana famonjena tanteraka ao amin’i Kristy, anisan’izany ny fanamarinana, ny fanamasinana ary ny voninahitra (1. Korintiana 1,30). Isika dia miaina ireo lafiny rehetra amin’ny famonjena antsika amin’ny alalan’ny fahasoavana, ao amin’i Jesosy, amin’ny alalan’ny Fanahy nomena antsika ho zanak’Andriamanitra natsangany, izay tena maha-izy antsika tokoa.
Ny fieritreretana ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izany fomba izany dia manova ny fomba fijerintsika ny zava-drehetra amin'ny farany. Ohatra, amin’ny fanaoko isan’andro, dia mety hieritreritra ny amin’izay nafindrako an’i Jesosy aho. Rehefa mieritreritra indray ny fiainako amin’ny fomba fijerin’ny maha-izy ahy ao amin’i Kristy aho, dia niova ny eritreritro mba hahatakarana fa tsy zavatra tiako hitarihana an’i Jesosy izany, fa antsoina aho mba hiaraka aminy sy hanao izay ataony. Io fiovana eo amin’ny fisainantsika io no tena fototry ny fitomboan’ny fahasoavana sy ny fahalalana an’i Jesosy. Rehefa mifandray akaiky kokoa aminy isika, dia mizara bebe kokoa ny zavatra ataony. Izany no foto-kevitra momba ny fitoetra ao amin’i Kristy izay lazain’ny Tompontsika ao amin’ny Jaona 15. Antsoin’i Paoly hoe “miafina” ao amin’i Kristy izany (Kolosiana 3,3). Heveriko fa tsy misy toerana tsara kokoa hiafina satria tsy misy na inona na inona ao amin'i Kristy afa-tsy ny hatsarana. Takatr’i Paoly fa ny ho ao amin’i Kristy no tanjon’ny fiainana. Ny fijanonana ao amin’i Jesosy dia mitondra haja sy tanjona mahatoky ao anatintsika izay efa nomanin’ny Mpamorona antsika hatramin’ny voalohany. Izany maha-izy azy izany dia manafaka antsika hiaina ao anatin’ny fahafahana amin’ny famelan’Andriamanitra fa tsy ao anatin’ny henatra sy ny meloka intsony. Izany koa dia manafaka antsika hiaina miaraka amin’ny fahalalana azo antoka fa Andriamanitra dia manova antsika avy ao anaty amin’ny alalan’ny Fanahy. Izany no tena maha-izy antsika marina ao amin’i Kristy amin’ny alalan’ny fahasoavana.
Mandika vilana sy mandika ny toetoetran'ny fahasoavan'Andriamanitra
Indrisy anefa fa maro ny olona no mandika vilana ny toetran'ny fahasoavan'Andriamanitra ka mahita izany ho fandalovana malalaka mankany amin'ny fahotana (fahadisoan'ny antinomianisma izany). Amin'ny ankapobeny, io hadisoana io dia mitranga matetika rehefa te-hamatotra ny fahasoavana sy ny fifandraisana miorina amin'ny fahasoavana amin'Andriamanitra ho fananganana ara-dalàna ny olona (izany no fahadisoan'ny lalàna). Ao anatin'io rafitra ara-dalàna io, dia matetika no diso hevitra ny fahasoavana ho fanavahana an'Andriamanitra amin'ny fitsipika. Lasa fialan-tsiny ara-dalàna ho an'ny fankatoavana tsy mifanaraka amin'izany ny fahasoavana. Rehefa takatra toy izany ny fahasoavana, dia tsinontsinoavina ny hevitra ara-Baiboly momba an’Andriamanitra amin’ny maha Ray be fitiavana izay mananatra ny zanany malalany. Ny asa ara-dalàna dia tsy misy fanamarinana, ary ny fahasoavana dia tsy misy afa-tsy amin'ny fitsipika. Ity tsy fahazoan-kevitra momba ny fahasoavana ity dia matetika mitarika amin'ny fomba fiaina malalaka sy tsy voarindra izay mifanohitra amin'ny fiainana mifototra amin'ny fahasoavana sy ny filazantsara izay zarain'i Jesosy amintsika amin'ny alalan'ny Fanahy Masina.
Mety hampitony ny feon’ny fieritreretana meloka izany tsy fahatakarana mampalahelo ny amin’ny fahasoavana izany (miaraka amin’ny fehin-kevitra diso momba ny fiainana kristiana), nefa tsy nahy ny fahasoavan’ny fiovana – ny fitiavan’Andriamanitra ao am-pontsika izay afaka manova antsika avy ao anaty amin’ny alalan’ny Fanahy. Ny tsy fahampian'io fahamarinana io dia mitarika ho amin'ny fanamelohana miorim-paka amin'ny tahotra. Raha miresaka avy amin'ny zavatra niainako manokana aho dia afaka milaza fa ny fiainana miorina amin'ny tahotra sy henatra dia safidy ratsy ho an'ny fiainana miorina amin'ny fahasoavana. Fa izany no fiainana entin’ny fitiavan’Andriamanitra miova, izay manamarina sy manamasina antsika amin’ny firaisana amin’i Kristy amin’ny herin’ny Fanahy. Mariho izay nolazain’i Paoly tamin’i Titosy:
Satria efa niseho tamin’ny olona rehetra ny fahasoavana manasitrana avy amin’Andriamanitra ka mitondra antsika ho amin’ny famaizana, dia ny handà ny toetra tsy araka an’Andriamanitra sy ny filan’izao tontolo izao ary ny hiainantsika amin’ny fahendrena sy ny rariny ary ny toe-panahy araka an’izao tontolo izao. (Titus 2,11-12)
Tsy namonjy antsika Andriamanitra mba hamelana antsika irery miaraka amin'ny henatra, tsy misy fahatapaham-po ary ny fomba fiainana manimba sy manimba. Namonjy antsika tamin'ny fahasoavana Izy mba hahafahantsika miaina ao amin'ny fahamarinany. Ny fahasoavana dia midika fa tsy manary antsika mihitsy Andriamanitra. Manohy manome antsika fanomezana amin'ny fizarana firaisana amin'ny Zanaka sy fiarahana amin'ny Ray Izy, ary koa afaka mitondra ny Fanahy Masina ao anatintsika. Manova antsika izany mba hitovy bebe kokoa amin'i Kristy. Ny fahasoavana dia izay mahasoa antsika tokoa.
Ao amin'i Kristy isika ary ho zanaky ny Raintsika any an-danitra foana isika. Ny hany angatahinay hataontsika dia mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana fahalalana momba azy. Mitombo amin'ny fahasoavana isika amin'ny alalantsika mianatra matoky azy amin'ny alalany ary mitombo ny fahalalana azy amin'ny alàlan'ny fanarahana azy sy ny fandaniany fotoana miaraka aminy. Tsy mamela antsika amin'ny fahasoavana fotsiny Andriamanitra rehefa miaina ny fiainantsika amin'ny fankatoavana sy fahatahorana fa Izy koa dia manova antsika amin'ny fahasoavana. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ao amin'i Kristy ary amin'ny alàlan'ny Fanahy, dia tsy mitombo amin'ny toerana izay hitantsika fa tsy mila an'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Mifanohitra amin'izany, ny fiainantsika dia miankina aminy amin'ny lafiny rehetra. Ataony vaovao isika amin'ny fanasana antsika any ivelany. Raha mianatra mianatra mijanona ao amin'ny fahasoavany isika dia hahafantatra azy tsara kokoa, tiavo azy sy ny lalany feno. Arakaraka ny ahafantarantsika sy tiantsika azy no hahalalantsika ny fahalalahana hiala ao amin'ny fahasoavany, tsy hanan-keloka, tahotra ary henatra.
Toy izao no nosoratan'i Paoly:
Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana; fa tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, fa tsy avy amin'ny asa, mba tsy hisy hirehareha. Fa asany isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin’Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy (Efesiana). 2,8- iray).
Aoka tsy hohadinointsika fa ny finoan’i Jesosy – ny fahatokiany – no manavotra sy manova antsika. Araka ny nampahatsiahivin’ny mpanoratra ny Hebreo antsika, dia i Jesosy no fiandohana sy mpanatontosa ny finoantsika2,2).
Ny maha-izy antsika vaovao ao amin'i Kristy (Fizarana 1)